“Culimadu Waxay Leeyihiin, Ninku Afar Bilood Xaaskiisa Kama Maqnaan Karo, Si Loo Badbaadiyo Akhlaaqda Muslimiinta, Sharci iyo Caqli meel ay ku taallaa ma jirto Intaas Oo Sannadood Baan Maqnaanayaa Oo Aan Shaqeynayaa” | Maalmahanews
“Culimadu Waxay Leeyihiin, Ninku Afar Bilood Xaaskiisa Kama Maqnaan Karo, Si Loo Badbaadiyo Akhlaaqda Muslimiinta, Sharci iyo Caqli meel ay ku taallaa ma jirto Intaas Oo Sannadood Baan Maqnaanayaa Oo Aan Shaqeynayaa”
Rasuulku Wuxuu Yidhi Kii Ehelkiisa Isku Barbar Taaga Waa Reerkayagii, Waa Sidii Nin…” Sheekh Aadan-Siiro
Hargeysa (Hubaal) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), oo Khudbadaha Jimcaha ee uu ka jeediyo Masaajidka uu Khaddiibka ka yahay ee Xaafadda Xawaadle ee Magaalada Hargeysa, kaga hadla Arrimaha khuseeya Bulshada, si wixii khaldan loo saxo, ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay sida aanay u wanaagsanayn in Qofku uu Ehelkiisa ama Beeshiisa uu ka dhashay uu isku barbar-taago Xaq-daro.
Sheekha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidh, “Rasuulku wuxuu yidhi kii Ehelkiisa ku kaalmeeya Arrin aan xaq ahayn, ee isku barbar taaga waa Reerkayagii, waa sidii Nin Dabada qabsaday Awr ku koobtay Ceel dheer.”
Sheekh Aadan-siiro oo isla arrintaa sii faahfaahinaya ayaa sheegay, “Berigii (Aan Rasuulka la soo saarin) waxay odhan jireen (Qabaa’ilka Carabtu) Aniga waxaad iigu soo hagaagtaan inaan ahay Nin Reer Hebel ah, hadday (Beeshaydu) leexatana waan Leexanayaa, hadday Hanuuntana waan Waan Hanuunayaa, laakiin taasi waatii uu beddelay Rasuulku (CSW).” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Rasuulku wuxuu yidhi u gargaar Walaalkaa haddii la dul-miyayo iyo hadduu Walaalkaa wax dulmiyayo. Saxaabadu waxay waydiiyeen Rasuulka (CSW) hadduu wax dul-miyayo sideennu ugu gargaarnaa, wuxuu yidhi Rasuulku (CSW) Gacanta qabo oo joog dheh, guushuuna waataas ayuu yidhi Rasuulku (CSW), waana Fahamka Qabaa’ilka lagula dhaqmayo ee Rasuulku Tilmaamay (CSW).”
Sheekh Aadan-Siiro, waxa kale oo uu khudbaddiisa oo dheerayd kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin in Islaamku diiday in Ninku uu Xaaskiisa ka maqnaado Muddo ka badan Afar bilood, si loo ilaaliyo Akhlaaqda Qoysaska Muslimiinta.
“Culimadu waxay leeyihiin Ninku Afar bilood Xaaskiisa kama maqnaan karo, si loo badbaadiyo Akhlaaqda Muslimiinta. Ninka Mujaahidka ee ka dagaalamaya Hamadaan ayaa inta Xaaskiisa Faras lagu qaado halkaa loogu geyn jiray, ama isagaa la soo kaxeyn jiray oo halka Xaaskiisu joogto loogu geyn jiray, si loo ilaaliyo Bulshada Muslimiinta. Halkay ku taallaa intaas oo Sannadood baan maqnaanayaa oo aan Shaqeynayaa, Sharci iyo Caqli meel ay ku taallaa ma jirto. Wax Alaale iyo wixii dambi ah ee dhaca waxa la saaray Qofkaa Waalidka ah ee ka maqan Reerkiisa. Inaad Kaariyoone ku koriso, oo aad Carruurtaada Diintooda iyo Dhaqankooda ka adkaato oo aad la noolaato, ayaa ka khayr badan inaad tidhaahdo Malaayiin Lacag ah baan soo shaqeynayaa, oo uu ilmo keliya uu dariiqa toosan ka lumo. Gabadhuna hadday Afar bilood ku waydo waxay xaq u leedahay inay Qaadiga la hadasho.”